Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: ပြည်တွင်းက ဒီလိုရင်ဆိုင်နေရ၊
လာမည့် သြဂုတ်လ(၁၀)နေ.ကျရင် ဘန်ကောက်နဲ.ရန်ကုန်ကိုပျံသန်းနေသော ကုလသမဂ္ဂကယ်ဆယ်ရေး လေယဉ်များ ရပ်နာရတော့မည်၊မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်များအတွက် ရင်နာစရာ၊ နအဖစစ်ခေါင်းဆောင်များလာဘ်စားဝ၊ ကုလသမဂ္ဂ ကအသုံးမကျ၊ မြန်မာလူထုတွေကဒုက္ခအဝဝနဲ.ပေါ့၊
Aid groups: Ending Myanmar flights 'will hurt'
U.N. to stop flights between Thailand and Yangon on August 10
"It isabit ofablow not to have the helicopters guaranteed", says World Vision
U.N. helicopters allowed relief workers to reach remote stretches of flooded delta
BANGKOK, Thailand (AP) -- A United Nations decision to end aid flights to Myanmar next month could hurt relief efforts already struggling to reach millions of survivors with adequate food and water, humanitarian groups said Friday.
The U.N. plans to stop aid flights between Thailand's Don Muang airport and Myanmar's commercial capital, Yangon, on August 10 and withdraw the last five U.N. helicopters that have been ferrying relief supplies to the hard-hit Irrawaddy delta. Five other helicopters have already stopped flying.
"It isabit ofablow not to have the helicopters guaranteed," World Vision emergency coordination specialist Ashley Clements said by telephone from Myanmar.
"We're already dealing withaload that we didn't have enough helicopters for, so now the pressure will be compounded even more," he said. "If we have to go by road it means that supplies will be delayed."
Christine Kahmann,aspokeswoman for Action Against Hunger, agreed that ending the flights would hurt the relief effort.
The U.N. World Food Program's Paul Risley said the move to end the flights isaroutine step as relief efforts in Myanmar shift to reconstruction following the May 2-3 cyclone that killed 84,537 people and left 53,836 more missing, according to the government.
The U.N. helicopters have allowed relief workers to reach remote stretches of the flooded delta that were cut off when the cyclone hit.
U.N. officials and aid groups have criticized Myanmar's military junta for its slow response to the disaster and for restricting access to the delta, saying it prevented enough food, water and shelter from reaching survivors.
The U.N. says many survivors still lack adequate food and water.
U.N. humanitarian chief John Holmes said last week that one out of two families in Myanmar have food supplies of only about one day or less and some 60,000 children are at risk of malnutrition. He said the cyclone wiped out 42 percent of the nation's overall food stocks.
သတင်း VDO, သတင်း။ News
ဖန်းတဂွန် စစ်ဌာနချုပ်သုံး ကွန်ပျူတာများထဲသို. ဖောက...
မုန်တိုင်းကိစ္စနဲ.စပ်လျဉ်း၍ ခိုးဝှက်ထားသော အလှူငွေမ...
အိုလံပစ် ကိုချစ်လွန်လို. အင်တာနက်သမားတွေကို ဖမ်းနေ...
ဒေါ်စုကြည်ကို လွှတ်ပေးမလိုလို၊ ချေးစားဖို. ဟန်ဆောင်ေ...
စစ်ရာဇာဝတ်ကောင်း Radovan Karadzic ရာဒိုဝန် ကာရာဒ်ဇ...
လေအားလျှပ်စစ် (WIND ENERGY) လုပ်ချင်တယ်လို. HMYြေ...
ဂျုလိုင်လ(၁၇) ရက်နေ.ကျရင် နိုင်ယက္ခ(ခ)ကိုနေဝင် နှင်...
ကိုယ်က အသာစီးရနေပြီလို.ထင်ပြီး နွားကျောင်းသားစကားေ...
၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် စစ်အစိုးရကျင်းပမည့်ရွေးကောက်ပွဲကို...
နာဂစ်မုန်တိုင်းဘေးသင့်ဒေသများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ ...
လည်ပင်းရှည် ပဒေါင်များအား ရှာဖွေမှု စတင်
ထောင်နှင့်ချီသော ကရင်နီရွာသားများ တောတွင်းတွင် တိမ...
မဲဟောင်ဆောင်မှ ကယန်းခေါ် ကြေးကွင်းပတ် ပဒေါင် ၁၁ဦး ...
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တပ်ဆင် ကိုထောက်ခံသည့် စစ်...
ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကို စစ်အစိုးရ...
ဝါဆိုဝင်ကာလမရောက်ခင် ရန်ကုန်မှာရှိသည့် ဘုန်းဘုန်းေ...
မြို.ပေါ်မှာ ဗုံအသံကျယ်မလား? လူထုအသံကျယ်မလား?